Akwukwo ozi nke Blog nke ihe akpadoro Indian nke akporo "Egwuregwu na Njem" THE INDIAN FACE
10 AKWOCKWỌ EGO NA AKW SPKWỌ AHVRV ADAN
Mgbe anyị na-eche banyere egwuregwu ndị kacha njọ ihe mbụ na-agbata gị n’obi bụ njem na adrenaline. Yinggbachitere uwa na inyocha onodu mmadu anyi n’eduba anyi na ndu n’ezie. Ma n'azụ njem ọ bụla, enwere akụkọ mgbe ochie ... ezigbo akụkọ! Nke ezigbo nwoke nwere ume, na ezigbo ebe.
Nchịkọta vidiyo egwuregwu snow kacha dị ịtụnanya
Taa na The Indian Face Anyị na-ewetara gị nhọrọ vidio egwuregwu oyi nke ga-eme ka ị ghara ikwu okwu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ihe ịtụnanya kachasị egwu, ọdịda na ihe nzuzu afọ a, gụkwuo.
Ngwa kachasị mma ịme egwuregwu oge oyi na-enweghị oyi
Ọtụtụ mgbe anyị nwetụrụ ntakịrị umengwụ ma a bịa n'ịrụ egwuregwu na snow n'ihi ụfọdụ ihe mpụga dị ka oyi.
N'afọ a, ọ nweghị ihe nwere ike igbochi gị The Indian Face Anyị ekpebiela iwetara gị usoro ị ga - enyere gị aka ị nweta ihe kachasị mma na snoo na - echeghị banyere oyi.
Egwuregwu oyi na-atụkarị n'anya
Anyị niile maara asọmpi oyi a na-ahụkarị dịka ski, ice sọọsụ, ma ọ bụ skim. Ma enwere otutu egwuregwu wacky siri ike ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị iche.
En The Indian Face Anyị chọrọ inye aka, ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ụfọdụ n'ime ha, iji nye gị nkọwa dị nkenke na ọ dịghị onye fọdụrụ na-enweghị egwuregwu oyi kachasị amasị ha.
Egwuregwu n’oge oyi ị ga-achọ ịnwale n’afọ a
Oge oyi ahụ apụtaghị na anyị ga-anọrịrị na-anọghị n'ụlọ, na Kama nke ahụ, ọ bụ egbe ịmalite oge egwuregwu oyi.
En The Indian Face Anyị enweghị ike ịnọ jụụ ọbụlagodi mgbe oyi na-atụ na anyị maara na ị bụkwa mmụọ na-enweghị nkwụsi ike na enweghị ike ịkwụsị, na-achọkarị ahụmịhe na ihe ị ga-eme, anyị na-ewetara gị ụfọdụ egwuregwu ị nwere ike ịnwale maka oge oyi a.
Ndụmọdụ iji gbochie ihe egwu nke ọghọm ma ọ bụ nsogbu
Ọ bụ ihe dị mma na mgbe ikuku siri ike anyị, ndị hụrụ egwuregwu egwuregwu oyi, lere ugwu anya ka anyị chọ ime ihe. Mana taa anyị chọrọ ichetara gị ihe ọghọm nke mkpokọta snow na-eche maka ndị na-ebugharị ma ọ bụ na-enye snow ma na-enyekwa gị ụfọdụ ndụmọdụ iji gbochie ihe egwu nke ọghọm ma ọ bụ nsogbu. Ọ baghị uru […]
Nke dịpụrụ adịpụ Kite Surf na-akwado ya
Lelee Kite a nwere mmasị na ụgbọ ala nke Marc Jacobs nwalere site n'enyemaka nke ndị otu ọkụ ọkụ. Therụ ugboala nke ike nke ikuku na-efegharị na nke dị ọcha kpamkpam bụ ebumnuche nke ihe ịma aka a. Jacobs chọtara Mino ochie wee jiri echiche nke […]
Sọọsọ na ebili mmiri na Punta Galea na Getxo
Taa, anyị ewetara gị vidiyo nke Mkpesa Punta Galea 2015, nnwale sọfụ a ma ama maka ọnụnọ nnukwu ebili mmiri, n'etiti mita isii na asatọ, na-eme ka ọ bụrụ ihe dị egwu. N'oge emume a, onye america Nic Lamb bụ onye meriri nke itoolu nke Punta Galea Challenge, nke a na-eme […]
Oge enwere mmetụta n'ifufe ikuku n'agwaetiti Tasmania
Tasmania, mba nke so na Commonwealth nke Australia, rụrụ otu ndị mejupụtara ikuku ikuku kachasị n'ụwa (gụnyere Victor Fernández, onye Spen Chaser) ụbọchị abụọ n'okpuru oke ifufe siri ike na oke oke ịba ụba na mpaghara ebe okwute. na oke ohia. N'oge a, Thomas Traversa, Dany Bruch, Leon […]
Rọbụ Russia na -15 degrees na Vladivostok
Evernu awụla mgbe ọ dị oke oyi? Ọ na-amasị gị ịfụ mmiri n'oge oyi? You ga - ewere akwa mmiri gị wee banye ụgbọ mmiri ma gaa chọta ebili mmiri n'ụsọ osimiri na ogo 15 n'okpuru efu? Ikekwe ọ bụghị. Ma obu ikekwe ee, anyi nwere otutu ndi huru egwuregwu di egwu n'anya n’etiti ndi ọha. Ma gịnị bụ n'ezie […]
Ski Jumping and Ski Flying: follies na skai wick nke 80s
N'ime afọ 80s, asọmpi egwuregwu ịwụfu elu bụ otu n'ime egwuregwu kachasị egwu enwere ike ịme. Ọbụna taa, a ka nwere ike ịtụle ya. A na-atụ aro vidiyo a ka ị hụ ma egwuregwu a ọ̀ na-atọ gị ụtọ. ọsọ, na nkenke na ịrịba landings na […]
Etu ị ga - esi gbanarị ajọ nsogbu: ezigbo akụkọ (vidiyo dị egwu)
Taa anyị na-ekerịta gị vidiyo dị egwu ma sie ike nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla. Ma ọ dịkarịa ala, ndị na-eme freeride ma ọ bụ ndị na-eme snow ma ọ bụ na-agbaze na mpaghara nwere oke ikuku. Na vidiyo na-esonụ, ị ga-ahụ otú otu ìgwè nke ndị na-eme njem na-emefu onwe ha na mpaghara ebe snow na-amaghị nwoke, […]
Atukwasila obi n’okporo uzo ma obu uzo ndi ozo n’ime snow
Taa, anyị na-ewetara gị vidiyo na-achọ nghọta nke anyị dọrọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke ịgbaso ụzọ ndị ọzọ na-agba ọsọ mgbe ị na-eji ụgbọ mmiri gị na-agafe n'ugwu snow. N'ime ya ị nwere ike ịhụ ka onye na-agba snow nke na-amịgharị site na snow, ma onye nwere igwefoto mkpanaka GoPro, na-agbaso ụzọ […]
Ọ dekọba ụdị ọghọm nke ya onwe ya siri wee lie ya: Ọ bụ ọrụ ebube zọpụtara ya
Taa, anyị na-ewetara gị vidiyo dị egwu nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla. Onye na-agba n’agba na-eme ka ikuku na-amụ mmiri, n’ihi ọrụ ya na mbuze ala, ọ kpatara oke ikuku nke mechara lie ya. Ebe ọ bụ na enwere kamera ụdị GoPro nwere, ọ nwere ike dee ihe niile. N'oge vidiyo ị nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru oke ka ọ na-amalite […]
Pat Moore na 'snowboard' mepere emepe '
N'otu oge ekeresimesi, mgbe Pat Moore dị obere, Santa Claus wetara ya bọọdụ snow; Onweghi onye nọ n’oge ahụ nwere ntakịrị echiche gbasara mmetụta onyinye a ga-emetụta ndụ Pat Moore. Mgbe o ruru ogo, o denyere aha ya na mmemme Waterville snow […]
Splitboard: oge ​​dị n'etiti sọọsọ snow na sọọsọ obodo
Site na echiche dị oke mkpa anyị nwere ike ikwu na splitoboard bụ snowboard nke na-agbaji ọkara. N'ihi na nrịgo ọ bụ ihu ka ọ bụrụ skis abụọ; na itinye skins akara ya na igbanwe onodu nke abuo nke anyi di njikere ime n ’uzo ahu. Maka mkpụrụ ha sonyere […]
Surchọgharị na Antarctica: Ihe ịma aka Ramón Navarro
Taa, anyị chọrọ isoro gị kerịta vidio a na-atọ ụtọ, nke Red Bull mepụtara, banyere njem dị egwu na Antarctica. Nyocha a na-eme mgbe niile nke onye na-ahụ maka Chile bụ Ramón Navarro maka nnukwu ebili mmiri n'akụkụ ụsọ obodo ya mere ka ọ na-agba ọsọ kachasị mma; ihe ịma aka bụ ime njem […]